अर्थतन्त्रको लकडाउन र पुन: प्राप्तिबाट प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र सर्टकट: मार्टिन भ्रिजल्याण्ड
प्रत्यक्ष लोकतन्त्र लकडाउन र अर्थव्यवस्थाको रिकभरीबाट सर्टकट
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	15 मई 2020 मा	• 24 टिप्पणिहरु
प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र वर्तमान डरावनीबाट समाधान हो जसमा डच सरकारले हाम्रो देशलाई डुबायो। यो प्रजातन्त्रको एउटा रूप हो जसमा जनताले सिधै अनलाइन (सुरक्षित) मतदानमार्फत आफ्ना प्रतिनिधिहरू छान्छन्। पुनर्गठन र नेतृत्वगुणका गुण भएका मानिसहरूलाई मतदान गरिएको छ। सबै भन्दा बढी मतको साथ व्यक्ति मन्त्री पदमा जित्छ। प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यस्तै लाग्छ।
कानूनहरू परिमार्जन गरिनु पर्दछ र अनुमोदन वा अस्वीकृतिका लागि स्पष्ट सरल शब्दावलीमा जनता समक्ष प्रस्तुत गर्नु पर्छ। कानूनहरूलाई म्याद सकिने मिति दिइन्छ र भोट आउट गर्न सकिन्छ वा स्वत: नविकरण गर्न सकिन्छ जब त्यो मिति समाप्त हुन्छ। एक राम्रो कानून बाँकी छ। खराब कानून हराउछ।
तपाईं प्रत्यक्ष लोकतन्त्र निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ जबकि वर्तमान सरकार अझै छ। यो प्रतिरोधको स्मार्ट रूप हो जुन तुरून्त क concreteक्रिट हुन सक्छ। शान्त र छिटो क्रान्ति। तपाइँ चुनावको लागि पर्खनुहुन्न, तर तपाइँको चुनाव प्रत्यक्ष अनलाइन व्यवस्थित गर्नुहोस्।
यो तुरुन्त कंक्रीट हुन सक्छ, किनकि तपाईं अवस्थित सामाजिक संरचनाहरूलाई अक्षुण्ण राख्नुहुन्छ, तर नेताहरूलाई अनलाइन मतदान मार्फत बदल्नुहोस्। मुकुटको कठपुतलीहरू ब्यक्तिबाट व्यवस्थापकहरू द्वारा बदलिन्छन्।
सुरक्षा प्रणाली प्रदान गर्ने र यसले उम्मेदवारको चुनाव अवस्थित गर्न सक्ने भोटिंग प्रणालीहरू। यो blockchain मार्फत वा तपाइँको DigiD को लिंक मार्फत गर्नु उत्तम हुनेछ, तर हामीले आउने सरकारले सहयोग गरेको आशा गर्न सक्दैनौं, हामी आफैं यो प्रबन्ध गर्न सक्दछौं। FVVD पहिले नै यसको लागि प्लेटफार्म प्रदान गर्दछ (www.fvvd.nl).
तलको पत्रले यसलाई विस्तृत रूपमा वर्णन गर्दछ र एक श्रृंखला पत्र हो जुन तपाइँ सीधा तपाइँका साथीहरू वा परिचितहरूलाई पठाउन सक्नुहुनेछ:
संक्षिप्तमा वर्तमान सरकार र हामीले कुरा गरेका "बुद्धिमान लक" को बारेमा।
बिस्तारै, मेरो क्षेत्रमा, अधिक र अधिक मानिसहरूले देख्न थाले कि सरकारले समग्रमा समाज परिवर्तन गर्न चाहन्छ। त्यो "बौद्धिक लकडाउन" बिस्तारै स्थायीमा परिवर्तन हुनेछ, जहाँ तपाईंले स्वतन्त्रता फिर्ता किन्नु पर्दछ। नयाँ सामान्य एक मिटर र समाजको आधा हुन्छ र तपाइँ आफैले यसको लागि तिर्नु पर्छ। म यसबाट थकित छु।
सुन्नुहोस्, कम्पनीहरूले अब महँगो सल्लाहकारहरू भाडामा लिन सक्छन् कसरी सल्लाह छ फिट मा आफ्नो व्यवसाय सेट अप गर्न को लागी। तपाइँ शर्त लगाउनुहुन्छ कि त्यहाँ एक मूल्य ट्याग संलग्न छ; कम्पनीको लागि मूल्य ट्याग (किनकि यसले सम्भवतः १. meter मिटर उपायको लागि आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्नेछ) र ग्राहकको लागि मूल्य ट्याग (किनभने कसैलाई त्यो डेढ मिटरमा खानी छ र आयमा आएको गिरावट)।
यो सम्भावना छ कि आगामी कोभिड - १ vacc खोप केवल अनिवार्य हुनेछ। तपाईं यसको बारेमा के सोच्नुहुन्छ?
तपाईलाई के लाग्छ ... यो प्रश्न बाहेक कि यो खोप पूर्ण रूपमा राम्ररी परीक्षण गरिएको छ वा छैन, र यो प्रश्न बाहेक हामी समाजबाट त्यो डेढ मिटर उपकरण चाहन्छौं कि चाहँदैन। मलाई लाग्छ रुट्ट अडिग छ र उनीहरूले वास्तवमा हेगमा आन्दोलन गरिरहेका मानिसहरूलाई सुन्दैनन्।
मलाई थाहा छैन तपाईं यसको बारेमा के सोच्नुहुन्छ, तर प्रविधि सम्भवतः ती सबै उपायहरूको अनुगमन गर्न प्रयोग गरिनेछ। त्यो टेक्नोलोजी र ठूलो डाटा भर्खर आउने छ, किनकि त्यहाँ धेरै धेरै कम्पनीहरू छन् जुन फेरि चाखलाग्दो निब्बल कमाउन सक्छ। वा तपाईं यसलाई फरक रूपमा देख्नुहुन्छ? मेरो विचारमा धेरै व्यक्तिहरू आईसीटी समाधान प्रदान गर्ने ठूला कम्पनीहरूमा वा सरकारी एजेन्सीहरूको लागि काम गर्दछन् जुन उनीहरूले पनी आफ्नो घरको लागि भुक्तान गर्न जारी राख्न सक्दछन् र आफ्नो परिवारको देखभाल गर्न सक्छन् भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्दछन्। ती व्यक्तिहरूले केहि सही छैन भनेर देख्न सक्दछन्, तर जब यो छनौटको कुरा आउँछ, धेरै मानिसहरूले आफ्नै घर र बगैचा छनौट गर्छन्।
तपाईं र मलाई यो नयाँ समाज कस्तो देखिनेछ भनेर थाहा छ। मिडिया र राज्यले बेच्न आवश्यक छ भन्ने विश्वास गर्न जारी राख्छ र यसलाई परिचय गराउने तरिका चरणबद्ध हुँदै जान्छ, ताकि जनताले यो विश्वास गर्न जारी राख्दछ कि कोरोना भाइरस हुनु वास्तवमै आवश्यक छ। यसले मलाई खुशी पार्दैन।
के तिमी त्यो जसले भन्यौ? प्रक्रिया 'बेल्ट कस' बाट 'बस कम्मरमा बसोबास' गर्न तरंग आन्दोलनमा अगाडि बढ्नेछ र अर्को तरंग आउँछ। डेढ मिटर ब्यबस्थाको अवधि र चलाखको लागि केही थप कोठा पछि, मिडिया, विशेषज्ञहरू (RIVM को तथ्या production्क उत्पादन) र राजनीतिज्ञहरूले हामीलाई कोरोना भाइरसको पुनरुद्धार देखाउँछन्, जुन पछि अर्को भाग को परिचय। प्याकेजलाई जनताले अँगालेका छन्।
ठिक छ, मलाई याद छैन कि यदि तपाईंले त्यसो भन्नुभयो भने, तर धेरै व्यक्तिहरूले हामी कसरी खेल्ने छन् भन्ने बारेमा सबै जानकारीहरू पत्ता लगाइरहेका छन् (सबै नक्कली समाचारहरू बाहेक)। हामी कसरी खतरनाक खोपहरू हुन्छन् भन्ने बारे धेरै जानकारी पाउन सक्दछौं, कसरी माइक्रोसफ्ट प्याटेन्टले हामीलाई डिजिटल खोप प्रमाणपत्र दिन चाहन्छ, बिल गेट्सले कसरी मिडिया र भ्याक्सिन उद्योगमा लगानी गर्छ, कसरी अनुप्रयोगहरू हाम्रो निगरानी गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। मलाई लाग्छ कि हामी द्रुत रूपमा कुल डिजिटल नियन्त्रण प्रणालीमा धकेलिएका छौं। मलाई लाग्छ कि जानकारी एकदम महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यदि तपाईंलाई थाहा छैन के खतरा भनेको तपाईं माथि हड्दैछ, तपाईं समयमा टाढा उफ्रिनुहुन्न। जहाँसम्म, अर्को चरण हुनुपर्दछ। हामी समाधानको साथ आउनु पर्छ।
मलाई लाग्छ यदि तपाइँ र मैले केहि पनि गरेनौं भने हामी त्यस्तो समाजमा सर्नेछौं जहाँ अधिक नगद छैन, त्यस्तो समाज जहाँ अनुप्रयोगहरू, क्यामेराहरू र ठूला डाटा थाहा हुन्छ हामी कहाँ हौं वा हामीसँग ठीक तापमान छ (ठीक छैन १))। र हामी सबै को कुराकानी गर्छौं। अर्को चरण भनेको यो सबै डाटालाई स्कोर प्रणालीको क्रममा लिंक गर्नु हो। म त्यसको लागि कुर्दै छु, म हुँ? पर्याप्त स्कोरको साथ वा बिना, तपाईं बाहिर वा ट्रेन जान वा विमानमा वा जस्तो गरी जान सक्नुहुन्छ। त्यो एक पागल घर हुनेछ! सम्भावित डिजिटल मार्कमा त्यो सबै डाटाको लिंक र तपाईंको डिजिटल बैंक ब्यालेन्समा लिंक ठूलो मजाको छ। एक प्रकारको खुला जेल।
मलाई लाग्छ कि हामी एउटा वेबमा चलाइरहेका छौं, र चीनले उदाहरणका साथ प्रदान गर्दैछ कि कसरी राज्यको रूपमा तपाईंले मानिसहरूलाई यसलाई पालन गर्न बाध्य पार्न सक्नुहुन्छ। म चीनमा बस्न चाहन्न। चीनले विपक्षमा उभिएको व्यक्तिलाई कसरी सहजै छोडिन्छ भनेर देखाउँदछ। त्यो त्यस्तो प्रणालीको स्वचालित प्रभाव हो। वा तपाईं यसलाई फरक रूपमा देख्नुहुन्छ? अन्ततः जनता फेरि यस अघि झुक्नेछन्, आंशिक रूपमा किनकि समाजमा धेरै मानिसहरु 'प्रणाली' को भागका लागि काम गर्छन्। यदि तपाईं आईटी मा काम छ र तपाईं डाटाबेस सफ्टवेयर आपूर्ति वा तपाईं क्यामेरा प्रणाली आपूर्ति, यदि तपाईं एक अन्वेषक अधिकारी को रूपमा वा एक पुलिस अधिकारी को रूप मा काम, तपाईं अझै पनि आफ्नो आय छनौट। यो यसरी जान्छ।
भर्खरै कसैले भन्यो: "त्यसो भए म मेरो स्मार्टफोन टाढा फाल्छु ताकि म प्रणालीबाट बाहिर निस्कें"। तर हामी यस्तो समयमा जाँदैछौं जहाँ समाजमा भाग लिनु डिजिडबिना वा ईहेर्केनिंग (कम्पनीहरूको लागि) बिना व्यावहारिक रूपमा असम्भव हुन्छ। त्यो मामला पहिले नै छ। नयाँ कोरोना टेक्नोलोजीको साथ पनि त्यस्तै हुनेछ। यदि तपाईंले आफ्नो स्मार्टफोन टाढा फाल्नु भयो भने, तपाईं अब सुपरमार्केटमा प्रवेश गर्न सक्षम हुनुहुने छैन। त्यसो भए तपाईं केवल स्पूल हुनुहुन्छ।
के तपाइँ यो लाग्छ कि यो आउँछ? मलाई लाग्छ ... र त्यसोभए तपाईं मात्र बाँच्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईंसँग आफ्नै आबंटन बगैचा छ भने, तर त्यसो भए तपाईं आफैले यसको बीज पनि लिन पर्छ, किनकि त्यो आत्मनिर्भरता सायद दीर्घकालीनमा पनि निषेधित हुनेछ। ठिक छ, मलाई तपाईको बारेमा थाहा छैन, तर मसँग समय छैन र त्यस्तो मन छैन।
मलाई लाग्छ अर्को चरण यो हुनेछ कि तपाई अब सार्वजनिक क्षेत्रहरुमा हुनुहुन्न यदि तपाईसँग खोप छैन भने। र त्यो "बिग डाटा" ले सायद यसले पनि भूमिका खेल्नेछ। यदि त्यस्तो अनुप्रयोगले पछि भन्दछ कि तपाईंले भ्याक्सिन पाउनु भएको छ भने, सुपरमार्केट प्रवेश द्वारले तपाईंलाई भित्र छोड्नेछ; अन्यथा छैन। अन्तिम चरणमा, त्यस्ता अनुप्रयोगलाई सायद डिजिटल विशेषताले प्रतिस्थापन गर्ने छ जुन तपाइँको शरीर वा कुनै चीजसँग जोडिएको छ। मलाई थाहा छैन, तपाइँले सुन्नुभयो कि माइक्रोसफ्टले त्यसमा प्याटेन्ट वा केहि कुरामा काम गर्दैछ (यो कुनै षडयन्त्र होइन, मैले गुगल प्याटेन्ट साइटमा पढेको छु)। र यो केवल पूर्ण हुनेछ यदि तिनीहरूले तपाईंको बैंक ब्यालेन्स पनि यी सबैमा लिंक गरे। Brrrr .. चाँडै कुनै उम्कने छैन जब सम्म तपाईं 'जंगली मा' बाँच्न छनौट गर्नुहोस्, तर बाइ ..
हामी के चाहन्छौं भनेर चिच्याउन सक्छौं; हामी चिच्याउन सक्छौं कि हामी यो सबै चाहँदैनौं, तर यो मरुभूमिमा कराएको जस्तै छ। बहुमत 'प्रणाली' मा निर्भर गर्दछ। मलाई लाग्छ यो समयको बारेमा सोच्न को लागी: यदि तपाईं उनीहरूलाई हराउन सक्नुहुन्न भने, Em मा सामेल हुनुहोस्।
मलाई लाग्छ कि हामीहरू ठोस समाधानको साथ आउनै पर्छ जुन 'प्रणाली' को लागी काम गर्नेहरूले पनि अँगाल्न सक्छन्। हामीले ठोस र सम्भाव्य समाधानहरूको साथ आउनुपर्दछ जसले सुनिश्चित गर्दछ कि व्यक्तिले निश्चितताहरू गुमाउँदैनन्, तर उनीहरूको भनाइ छ। हामी अब माथिबाट लगाइएको निर्णयहरूमा पूर्ण निर्भर छौं। वर्तमान राजनीतिक प्रणालीले हामीलाई कुनै पनि प्रकारको सहभागिता बिना ती निर्णयहरू स्वीकार गर्न बाध्य पार्छ। मलाई लाग्छ कि यो फरक तरिकाले गर्न सकिन्छ। त्यो वास्तवमा अब परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। यो साँच्चै मलाई pisses।
म आजको दिन उही प्रविधि संग सजीलो चीजहरू चारै तिर मोड्ने अवसरको बारेमा पढ्छु, यसले बिना पूरै समाजलाई उल्ट्याउँदछ। यसको लागि प्रमुख लोकप्रिय विद्रोह वा क्रान्ति आवश्यक छैन। सबैजना बस के गर्न जारी राख्न सक्छन्। म तपाईंलाई यसको बारेमा के सोच्छु जान्न चाहन्छु, किनकि म तपाईंको रायलाई सँधै कदर गर्छु।
एक मात्र कुरा परिवर्तन हुन्छ कि निर्णय संरचना। मन्त्रीहरू र अधिकारीहरू जसले अब मुकुटमा रिपोर्ट गरिरहेका छन् र जनताको तत्काल स्वीकृति बिना कानून मार्फत दबाव दिइरहेका छन् जनतालाई रिपोर्ट गर्नु पर्छ। मन्त्रीहरू जनताको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा प्रतिस्थापन गरिनु पर्छ (जसले मुकुटको सट्टा जनताको प्रतिनिधित्व गर्दछ)। तिनीहरू यसलाई प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र भन्छन्। त्यो पनि इलोन मस्क द्वारा प्रचार गरिएको छ (ती टेस्ला कारहरूको)। त्यो एक मूर्ख केटा होइन ...
यदि त्यो प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र मार्फत सम्भव छ र यदि यसलाई छिटो प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भने, मलाई लाग्छ कि हामीले त्यसो गर्न सुरू गर्नुपर्दछ र यसलाई बढावा दिनुपर्दछ। त्यस्तो प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रमा जनताले जनप्रतिनिधिलाई अनलाइन चयन गर्दछन्। त्यसोभए तपाईं आफैं उम्मेद्वार बन्न सक्नुहुन्छ वा उम्मेदवारहरूमा हात पार्न र मतदान प्रणालीले समर्थनमा छनौट र वृद्धि सुनिश्चित गर्दछ। थोरै हल्यान्डको गट टैलेन्ट र अन्य टिभी कार्यक्रमहरू जस्तै मतदान प्रणालीहरू। प्रविधि त्यहाँ छ। मैले के बुझेको छु त्यो तत्काल सम्भव हुन्छ।
यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले कानून सरलीकृत गर्नुपर्नेछ र ती व्यक्तिलाई अनुमोदन वा समीक्षाका लागि पेश गर्नुपर्नेछ। हजारौं कानूनबाट, स्पष्टतामा, मात्राबाट गुणस्तरमा। प्रत्यक्ष सार्वजनिक सहभागिता। मलाई लाग्छ कि यो धेरै चलाख छ।
अनिवार्य खोप कानूनहरूले हामीलाई खोप लिन वा डिजिटल जेलमा जान छनौट गर्न अनुमति दिन सम्म हामी कुर्दछौं वा हामी त्यो क्षण प्रयोग गर्न सक्छौं। मलाई लाग्छ परिवर्तन हुनको लागि हामीले यस स of्कटको फाइदा लिनु आवश्यक छ। हामीले चाहेको तरिका बदल्नुहोस्! प्रत्यक्ष लोकतन्त्रले केही महिना भित्र अनलाइन मतदान प्रणाली मार्फत अवस्थित शक्ति संरचना बदल्न सक्छ। खैर: अन्ततः सबै इन्टरनेटमा ती सबै ऊन विचारको सट्टा ठोस केहि छ।
म तपाईलाई यसको बारेमा के सोच्दछु म जान्न चाहान्छु! मलाई लाग्छ यसका लागि समर्थन सिर्जना गर्ने समय आइसकेको छ। त्यसबारे व्यक्तिगत रूपमा कुरा गरौं। हामी यसलाई निर्माण गर्न सक्दछौं किनकि हामी सबैले फेसबुक ठुलो बनाएका छौं। तपाईं केवल साझा गरेर ... तपाईको वरपरका मानिसहरूलाई औंल्याएर। यसैले मैले सोचें कि म तपाईंसँग सम्पर्कमा छु।
यहाँ हेर्नुहोस्, यसलाई त्यहाँ राम्रोसँग वर्णन गरिएको छ: https://www.fvvd.nl/ र तपाईं तुरून्त एउटा निवेदनमा हस्ताक्षर गर्न सक्नुहुनेछ जुन देखाउँदछ कि हामी वास्तवमै सँगै यो गर्न चाहान्छौं। त्यो मात्र भाइरल हुनु पर्छ यदि तपाईं मलाई सोध्नुहुन्छ।
ठिक छ, म तपाईंबाट यो सुन्न सक्छु।
(PS शायद एक विचार: यो ईमेल हाम्रो अन्य साथीहरुलाई पठाउनुहोस्)
त्यहाँ त्यस्ता राजनीतिक प्रणालीले कसरी काम गर्दछ भन्ने बारे धेरै प्रश्नहरू छन्, तर सार यो हो:
यो छिटो कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ
कि यो प्रजातन्त्रको सुन्दर रूप हो
कि तपाईं फेरि वित्तीय प्रणाली ठोस बनाउन सक्नुहुन्छ
पछिल्लो कार्य गर्न सकिन्छ, उदाहरणका लागि, डिजिटल (र सम्भवतः कागज) गिल्डरको परिचय दिएर। त्यो गिल्डर त्यसपछि एक मानक द्वारा कभर हुन्छ पैसा को वर्तमान अवमूल्यन काउन्टर त्यो लिंकले नयाँ "सुनको मानक" बनाउँछ। त्यो शारीरिक सुन हुन सक्छ वा यो बिटकॉइन हुन सक्छ। तपाईं द्रुत रूपमा डिजिटल पैसा सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ र बिटकॉइनको साथ लिंक ("सुनको मानक" को रूपमा) पनि चाँडै स्थापित हुन्छ। निम्न जहिले पनि सबै कुरामा लागू हुन्छ: मानिसहरूले छनौट गर्छन्।
बहुमतले निर्धारित गर्दछ! र त्यो प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको सौन्दर्य हो। प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र पहिले कहिल्यै सम्भव थिएन, किनकि यसले केवल धेरै समय लिन सक्दछ। आजको टेक्नोलोजीको साथ, तपाईं चाँडै नै मानिसहरूलाई भनाइ दिन सक्नुहुन्छ। एउटा अनुप्रयोग र एक बटनको प्रेसको माध्यमबाट, तपाइँ उम्मेदवारलाई भोट दिनुहुन्छ र बटनहरूको एक प्रेसको साथ तपाइँले प्रस्तावहरू अनुमोदन वा अस्वीकार गर्नुहुन्छ।
"हो, तर यो सम्भव छैन, कानून यति धेरै जटिल छ कि को लागी र त्यहाँ को लागी धेरै धेरै कानूनहरु छन्!ठ्याक्कै र त्यो नै परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। नयाँ नेताहरूले सरल बनाउन, स्पष्ट कुराकानी गर्न र जनतालाई विश्वस्त पार्न सक्षम हुनुपर्दछ। बहुमत सधैं निर्णायक हुन्छ।
यसलाई डुब्न दिनुहोस्, यसको बारेमा सोच्नुहोस्, तर यसलाई धेरै लामो लिनुहोस्। हामी अहिलेको अवस्थाबाट द्रुत रूपमा बाहिर निस्कन आवश्यक छ र हामीले अब हामीलाई भवनबाट बाहिर शासन गर्ने व्यक्तिहरू छिट्टै प्राप्त गर्नु आवश्यक छ। थप पढ्नुहोस् www.fvvd.nl र तपाईंको प्रश्न 'प्रश्न र उत्तर' अन्तर्गत सोध्नुहोस्।
".. र यदि तपाइँ यसलाई टोलराइट गर्नुहुन्छ भने तपाइँका बच्चाहरू अर्को हुनेछन्"
स्रोत फोटो: https://www.facebook.com/Nantes.Revoltee/photos/
तपाईंले कोविड -१ vacc खोप लिनु पर्छ वा अस्वीकार गर्नु पर्छ यदि यो अनिवार्य भयो? के गर्ने?
सरकारी मामिलाहरूको बिरुद्ध जोर्डि Zwarts टन मा एling्गल छ, तर केहि प्राप्त छैन
सबैलाई बोलाउँदै: विद्रोही! प्रवर्तक: तपाईंको अमानवीय असंवैधानिक व्यवहार रोक्नुहोस्!
कोरोना स during्कटकालको समयमा पैसाको ठूलो मूल्यह्रासले हाइपरइन्फ्लेसन निम्त्याउँछ: बिटकइनको समाधान हो?
ठूलो परिवर्तन र ठूलो परिवर्तनको लागि समय: याचिकामा हस्ताक्षर गर्नुहोस्
ट्याग: आन्दोलन, लोकतान्त्रिक, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, विशेष, फोरम, fvvd भोज, लकडाउन, समाज, ministers, अनलाइन, मंच, क्रांति, मतदान गर्नुहोस्
15 मई 2020 मा 15: 27
एएनपी: पोल: VVD कोरोना दृष्टिकोणबाट seats 43 सीटमा बढ्छ
मतदाताहरूले सरकारको कोरोना दृष्टिकोणको सराहना गर्दछन्, जसले विशेष रूपमा सबैभन्दा ठूलो गठबन्धन पार्टी VVD लाई समर्थन प्रदान गर्दछ, आई एन्ड ओ रिसर्चको पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार। उदार पार्टीले virtual 43 भर्चुअल सिटहरूमा गणना गर्न सक्दछ, जबकि अन्य सबै दल १ 16 सीट मुनि अडिनेछन्।
15 मई 2020 मा 15: 29
एएनपी जोन डि मोल ... भरपर्दो सर्वेक्षण वा प्रचार? सबै अधिक समय यसको विपरित प्रमाणित गर्न।
15 मई 2020 मा 15: 42
सम्पूर्ण मतदान प्रणालीलाई विश्वास गर्नुपर्दैन जब तिनीहरूले 43 43 सीटहरू केवल ume XNUMX मा सिटको संख्या प्राप्त गर्न सक्षम हुन्छन् भनेर विश्वास गर्छन्। मदुरोडमका अधिकांश बासिन्दाहरू अझै मतदान प्रक्रिया र मतपत्रमा विश्वास गर्छन्।
ठीक छ, म तपाईंलाई एक भरपर्दो स्रोतबाट भन्न सक्छु कि मतपत्र बक्समा ठगी छ र यो औसत केरा गणतन्त्र भन्दा राम्रो छैन। एएनपी पनि मत गणनामा संलग्न छ
"नगरपालिकाहरूले एएनपीलाई (द्रुतगती नेदरल्याण्ड पर्सब्युरो) द्रुत गणनाको कुल संख्यामा पार गर्दछन्। यी मतगणनाहरूको आधारमा एनओएसले चुनावको साँझ प्रारम्भिक नतिजा प्रस्तुत गर्नेछ।
“नगरपालिका अधिकारीहरूले मतदान केन्द्र नतीजाहरू थप्छन्। तिनीहरूले मतदान केन्द्रहरूको आधिकारिक रिपोर्टको आधारमा यो गरे। नतीजाहरू एक गणना उपकरणको सहयोगले (प्राय: समर्थन सफ्टवेयर चुनाव) दुबै पार्टी स्तर र उम्मेद्वार स्तरमा सहयोग पुर्‍याइन्छ। ”
15 मई 2020 मा 15: 55
जोसेफ स्टालिन - 'मतदान गर्नेहरूले केहि पनि निर्णय गर्दैनन्। मत गणना गर्नेहरूले सबै निर्णय गर्दछन्। '
15 मई 2020 मा 16: 07
मलाई लाग्छ मोल अझै पनी एक मित्र वा कम्तिमा बर्लुसकोनीको व्यापार साझेदार हो। तिनीहरू आपसमा फ्रिमासनहरू सामूहिक रूपमा आफू र आफ्ना भाइहरूको लागि उज्जवल भविष्य निर्माण गर्दछन्, मानवताको लागि होइन।
16 मई 2020 मा 09: 10
यो बेन्नी काबालिस्टहरू रोक्नुहोस्, बर्लुस्कोनी कुख्यात पीआईआई लजको सदस्यको रूपमा चिनिन्छ। इटलीमा ग्लेडियोडियो संचालनको योजनामा ​​संलग्न रहेको यही लजले “रेड ब्रिगेड्स” को आडमा दर्जनौं मानिसहरूलाई मारेको थियो। तिनीहरू जहिले जान्छन् कसरी उचित प्याकेज र सामान्य संदिग्धहरू बेच्न।
16 मई 2020 मा 13: 51
फ्रीमासनरीले पश्चिमी समाजलाई डूम गरेको छ
धेरै महत्त्वपूर्ण पश्चिमी निर्णय निर्माताहरू, राजनीतिज्ञहरू, अर्थशास्त्रीहरू, र सैन्य अधिकारीहरू या त गोप्य समाजका सदस्यहरू हुन् वा प्रभावकारी हुन्छन् र प्रायः त्यस्ता सदस्यहरूको प्रभावमा पर्दछन् ... यो उही वैश्विकतावादी शैतानी संरचना हो जुन हामीले फ्रिमासनरीका केही लजहरूमा पत्ता लगाउँदछौं, जस्तै पीआईआई सत्तरीको दशकको शुरुमा इटालीको क्याल्वी अफेयरमा लज संलग्न थियो - गुप्तता, नक्कल, अनुचित प्रभावको अभ्यास, घुसपैठ, अधिकारीहरूको भ्रष्टाचार र जहाँ आवश्यक हुन्छ त्यहाँ हत्या पनि देखिन्छ।
22 मई 2020 मा 14: 43
चुनाव ?! बस यो बन्द, Trolongren फेरि स्वाद मिल्यो
क्याबिनेट (vd कोनिing): कोरोनाभाइरसको कारणले चुनाव स्थगन गर्न अस्वीकार गर्न सकिँदैन
"पत्रद्वारा मतदान गर्नु पनि 'सैद्धांतिक रूपमा कल्पना गर्न सकिने' छ, ओलोनग्रेन भन्छन्।" हाहाहा
खैर, प्राकृतिक ग्यास-मुक्त घरहरूमा अडिटको अदालतको रिपोर्ट पढ्नुहोस्, यसमा कस्तो गडबड छ। यो केहि खर्च हुन सक्दछ ... पर्याप्त मदुरोडम कर पैसा यसको मार्फत धक्का दिइन्छ
यसको हालको रूप मा, प्राकृतिक ग्यासमुक्त नेबरहुड्स कार्यक्रमले छिमेकीलाई प्राकृतिक ग्यासमुक्त बनाउनका लागि आन्तरिक र राज्य सम्बन्ध मन्त्री (BZK) को उद्देश्यमा पर्याप्त योगदान पुर्‍याउँदैन। गृह तथा राज्य सम्बन्ध मन्त्रीले ती अपेक्षाहरू बढाए जुन पूरा हुन सक्दैनन्।
22 मई 2020 मा 17: 16
मलाई भन .. यो मात्र लाग्छ। ग्यास बन्द, कि हाँसो ग्यास हुनु हुँदैन?
मन्त्री ओलोनग्रेन डेढ मिटर मतपत्र बाकस अनुसन्धान
COVID-१ p महामारी वर्तमानमा २०२१ संसदीय चुनावको आयोजन वा स्थगित गर्न सक्षम नभएको कारण होईन, तर यसले मतपत्र बाकसलाई फरक देखिन सक्छ। गृहमन्त्री काजसा ओलोनग्रेनले शुक्रबार संसदलाई लेखेको पत्रमा उनी यसबारे अनुसन्धान गरिरहेकी छिन्। यो केवल प्रतिनिधि सभामा मात्र होइन, २०२० को उत्तरार्धमा हुने सेन्ट इस्टाटियसको टापु काउन्सिल र केही नगरपालिका मतपत्र बाकसको चुनावमा पनि लागू हुन्छ।
गृह मन्त्रालयले मतपत्र बाकस समायोजन गर्न आवश्यक छ भने चुनाव कस्तो देखिन्छ भन्ने अवस्थाको लागि काम गर्ने छ। यो उदाहरण को लागि मतदान स्टेशन को एक नया डिजाइन हुन सक्छ। मन्त्री ओलोनग्रेनले वास्तवमै अरू कुनै उपाय नभएको खण्डमा पनि मतदान गर्ने सम्भावनाको उल्लेख गरे। यसमा उनी थप्छिन् कि मतदानको गोपनीयता र स्वतन्त्रताको साथ साथ स्थानमा सामान्य मतदानको साथ सुरक्षित गर्न सकिदैन।
15 मई 2020 मा 19: 08
यदि तपाईं ठूलो समूहको नेता बन्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले त्यो बिना ब्याज नै गर्नुहुन्छ र (डिजिटल) मुद्राको लागि होइन। जतिसक्दो चाँडो पैसा आउँछ, चीजहरू गलत हुन्छन्। वर्तमान सरकारहरूले धेरै कमाउन चाहान्दैनन्, तर पछाडिको ढोकाबाट यो पूर्ण भिन्न कथा हो।
मानिसहरूलाई नि: शुल्क पैसा दिन पनि सहयोगी हुने छैन, पैसाले समय दिन्छ जहाँ उर्जा दिन्छ। युवा अनुयायीहरूको रूपमा उनीहरू अधिकका लागि चिच्याउनेछन्।
यस ब्रह्माण्डमा सबै चीज नि: शुल्क बढ्छ र प्रकृतिको नियमहरू सबैका लागि एक समान हुन्छन्। अधिकांश मानवता र यसका नेताहरूले अहंकारी कानूनको साथ यी कानूनहरू प्रतिस्थापित गरेका छन्।
यस संसारमा सबैको अधिकार छ र एउटा जग्गा जमिनको खेती गर्ने। त्यहाँ धेरै भोजन हुनेछ कि त्यहाँ धेरै छ र कोही पनि भोको हुनेछैन।
आर्थिक वृद्धिको लागि कुनै जंगल काट्नु आवश्यक छैन। यदि तपाइँ अर्को देश जान चाहानुहुन्छ भने, तपाइँले केहि समयको लागि साटासाट गर्नुहोस्। आर्थिक वृद्धि स्वार्थी छ, आर्थिक वृद्धि स्वार्थ हो।
यो सबैको चासोमा छ कि यसले कार्य गरिरहन्छ किनभने हामी जान्दछौं यदि हामी यसलाई त्याग्छौं भने के हुन्छ।
हे छिटो यो पहिले happened भएको छ
15 मई 2020 मा 20: 10
मलाई लाग्छ कि यो एक शानदार विचार हो। कृपया यसलाई पूर्ण हृदयले समर्थन गर्नुहोस्।
दुई प्रश्नहरू छन्:
के तपाईं यो प्रणालीलाई जनतन्त्रको माध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको लागि लागू गर्न सक्नुहुन्न?
र तपाइँ कसरी पक्का हुन सक्नुहुन्छ कि यो प्रणाली भरपर्दो छ र हेरिएको छैन?
म पनि डिजिटल पैसा वा सामान्य रूपमा समाजको थप डिजिटलीकरणको पक्षमा छैन।
के यो प्रणालीलाई अधिक "समान" तरिकामा पनि लागू गर्न सकिन्छ?
16 मई 2020 मा 21: 57
टिप्पणीहरूमा सबै राम्रा र मूल्यवान अवलोकनहरू। यद्यपि त्यहाँ प्रतिक्रियाहरू छन् कि यस लेखमा लेखिएको पत्र छ र के यो पत्र पहिले नै प्रतिलिपि गरेर अरूलाई पठाईएको छ? यदि तपाईंसँग कुनै अन्य सुझावहरू छन् वा पत्रको सम्बन्धमा वा लक्षित समूहमा पुग्नको लागि, यसलाई साझा गर्न नहिचकिचाउनुहोस्। यो एउटा सानो गतिविधि हो, र जसरी भाइरस द्रुत रूपमा फैलिन्छ, यो सन्देश पनि द्रुत रूपमा फैलिन सक्छ। अन्य प्रतिक्रियाहरू (नियन्त्रणित साइटहरू) ले देखाउँदछ कि धेरैको पेट भावनाहरू परिवर्तन चाहन्छन्। त्यसकारण अब यो च्यानललाई अन्य च्यानलहरूबाट क्याप्चर गर्ने समय आइसकेको छ। पत्रको प्रतिलिपि बनाएर प्रश्नसँग वितरण गर्नु यो साझा गर्न यो एक तरीका हो। त्यस्तै, "अर्को अखबार" लिबरेशन डेमा वितरण गरिएको थियो, जुन मुद्रित संस्करण पनि थियो। म आशा गर्छु कि निवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने 930 .० जनाले पनि यो चिठ्ठी प्रतिलिपि गरेर अरूलाई बाँडे।
16 मई 2020 मा 23: 06
सहमत हुनुहोस्, अब यो कार्य लिने र यसलाई सक्रिय रूपमा प्रचार गर्ने समय हो। हामी केवल लेखहरूमा प्रतिक्रिया गरेर यसबाट बाहिर निस्कन सक्दैनौं, तर मानिसहरूलाई प्रोत्साहन दिएर।
16 मई 2020 मा 22: 11
यहाँ राख्नुहोस्, तपाईं आफ्नो chimeric प्रभाव संग बसेर हुनुहुन्छ, तर तपाईंलाई पहिले नै थाहा थियो। तल हेर्नुहोस्।
कोरोनाभाइरस भ्याक्सिन प्याटेन्ट https://patents.justia.com/patent/10130701 Attenuated Coronavirus खोपको रूपमा प्रयोग गर्नका लागि। Chimera प्रोटीन प्याटेन्ट https://patents.justia.com/patent/8828407 चीमेरा सिंह टाउको, बाख्राको शरीर, ड्र्यागन टेल “शे-बकरी” को शाब्दिक अर्थ "शीत Seतु" उर्फ ​​मप्रिकोर्नस शीतकालीन बोक्रा हो; एक Chimera घातक जनावर हो र अरु जनावरहरु बाट निर्मित, वास्तवमा यो Vaccine के हो।
यसबाहेक, गिलियड फेरि हिब्रूबाट गुप्त गरिएको चीज हो। यो निम्नको मतलब जस्तो देखिन्छ।
गिलियड (रिमिडिभाइयरको सिर्जनाकर्ता हो, भ्याक्सिन ट्रम्प सैन्यले ल्याएको खोपको million०० मिलियन चाहान्छ। त्यसैले तपाईं लुपमा हुनुहुन्छ, किनकि केहि पनिमा केही परिक्षण गरिएको छैन, र निश्चित रूपमा सबै भन्दा राम्रो इरादाको साथ बनेको छैन। कम्पनीको नाम हेर्नुहोस्। गुगलद्वारा अनुवादित र तल सन्दर्भ गर्दै।
साक्षीको ढेर हिब्रूमा गलीदको बराबरको नामको एक खाका। दुबै याकूब र लाबान बीच सम्वन्धको दृश्य चिह्नित गर्दै। Gen 31:47 (मानिसहरूलाई बाइबलमा सल्लाह दिनको लागि होइन, तर व्याख्या गर्नको लागि हो)
पोप फ्रान्सिस विश्वकोश Laudato सी (शिक्षण कागज) billion अरब मान्छे मार्न कल;
Induvidual एक आमन्त्रित षड्यन्त्रको साथ आमने सामने आएर अशक्त छ उसले विश्वास गर्न सक्दैन कि यो अस्तित्वमा रहेको छ। सदोमाइट, फेडोफाइल, degree 33 डिग्री फ्रिमासन। जे एडगर हूवर, एफबीआई निर्देशक।
तिनीहरूले विवाह गर्न चाहेको ठाउँमा तपाईं लैजानु भएको परिवर्तन गर्दछ।
त्यसोभए यो बुझ्न सजिलो छ कि ती मान्छेहरू कत्तिको दुष्ट छन्, यदि तपाईं तिनीहरूलाई बोलाउन सक्नुहुन्छ भने।
18 मई 2020 मा 22: 57
नेदरल्याण्ड्समा “आन्द्रे क्रानर” प्रकाशित र प्रिन्ट गरिएको प्रतिलिपिको रूपमा वितरित भएझैं जर्मनीमा एउटा अखबार पनि प्रकाशित भएको छ जसमा विपक्षीलाई हालका उपायहरूबारे पढ्न सकिन्छ।
यस प्रकारको समाचार फैलाउँदा निश्चित रूपमा धेरै व्यक्तिहरूलाई कम साथीहरूको दबाबको अनुभव गर्न मद्दत गर्दछ जब उनीहरूको पेटको भावनाहरू उनीहरूले सुरूमा सोचे भन्दा धेरै हदसम्म पुष्टि हुन्छन्। अवश्य पनि यो व्यक्तिहरूको समूहको कब्जाको लागि च्यानल हुनसक्दछ, तर त्यहाँ बढ्दो समूहको बीचमा केहि जीवित छ। त्यसकारण अब ठूलो जनसमुदायमा प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको पहललाई बढावा दिन आवश्यक छ। यसलाई पढ्ने प्रत्येकलाई आवाश्यक हुन्छ जसले पत्रको प्रतिलिपि गर्न र यसलाई फर्वार्ड गर्न, उदाहरणको लागि, तपाईंको प्राथमिक सर्कलमा १० ठेगानाहरू यस प्रश्नको साथ कि तिनीहरू पनि पत्र अग्रेषित गर्न चाहन्छन्। जब यो हुन्छ, यो प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र जस्ता परिवर्तन / वैकल्पिक सचेतनामा सजिलै वृद्धि हुन्छ। साथ परिचित व्यक्तिहरूको कार्य तर्फ पहिलो कदम हो, धेरै विपणकहरूले प्रमाणित गर्नेछन्।
तपाईलाई याद छ, पुरानो सामान्यको चाहना अब सम्भव हुनु हुँदैन किनभने त्यो प्रणालीले समाजलाई वर्तमानमा पारेको स्थितिमा पस्किने अवसर प्रदान गरेको छ। कृपया यो दिमागलाई बाहिर निकाल्नुहोस्। छनौट यो छ कि नयाँ सामान्य स्वीकार गर्न को लागी हामी अब मोबाइल फोनमा भेट्न र पढ्न वा वैकल्पिक अंगालो लिन र नर्तक नम्बर 5, १,, 15००, 500०००० वा १ मिलियन "एक आन्दोलन कसरी बनाउने" भन्ने हुन्छ।
आज एउटा सानो कार्यवाही गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् कति व्यक्ति तपाईं समक्ष पुग्न सक्दछन्। युवा पुस्ता र तिनीहरूका भविष्यका बच्चाहरू र नातिनातिनाहरूका लागि यो गर्नुहोस् !!! त्यसैले: https://www.fvvd.nl
20 मई 2020 मा 14: 50
स्पष्टताको लागि ff
कसले कानून र शाही आदेशहरु मा हस्ताक्षर?
संसद र रॉयल डिक्रीले स्वीकार गरेको विधायिका प्रस्तावहरु राजाबाट सह-हस्ताक्षरित (विपरीत हस्ताक्षर गरिएको) र त्यसपछि जिम्मेवार मन्त्री वा राज्य सचिव बाट हुन्छन्। त्यसोभए तिनीहरू प्रभावकारी हुन्छन्। विपरीत संकेतले देखाउँदछ कि यो राजा होइन तर मन्त्री जो जिम्मेवार छ (राजनीतिक रूपमा)
विली टगले फेरि गरेको छ…
20 मई 2020 मा 18: 54
वास्तवमा भन्ने हो भने कि उनीहरूले धेरै चलाखीपूर्वक संविधानमा समावेश गरेका थिए, त्यहि मान्छेहरूले सल्लाह दिएका थिए।
तिनीहरू एक अर्काको साथ चाहिन्छ र सँगै काम गर्दछन्, तर साधारण मानिसहरूलाई यो कुरा निश्चित हुँदैन। तिनीहरू एक अर्का संग एक विशेष बलियो सम्बन्ध छ।
जहाँ एक छ, अर्को छ। करहरू, पूँजी मूल्यांकन र शक्ति, र तपाईंको कार्य पनि विरासतमा भुक्तान नगरेको राजाको रूपमा अझै राम्रो छ। त्यहाँ आवेदन दिन आवश्यक छैन ताकि राम्रो उम्मेद्वारहरूले मौका पाउँदैनन्। त्यसो भए पनि नियुक्तिहरू तय गर्न प्रोत्साहित गरियो जसबाट उम्मेदवारहरू वास्तवमा उसको एजेन्ट हुन्छन्, सेवाको लागि हुन्। यस्तो अवस्थामा राजालाई कसले नियन्त्रणमा राख्छ? त्यसकारण त्यहाँ धेरै सुन्तला फ्यानहरू छन्। खैर यो एक सुन्तला फ्यान हुन भुक्तान गर्दछ। सुन्तला एउटा राजनैतिक दलको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो जुन उनीहरूले चलाखीपूर्वक राजाको पक्षपात नगरी विनाश गरे। यो हो ?? । २१ औं शताब्दीमा सामन्ती प्रणाली। यो बाट छुट्कारा पाऊ। अब निवेदनमा हस्ताक्षर गर्नुहोस्!
बम खतरा लेखे:
20 मई 2020 मा 21: 05
वास्तवमा यो हस्तक्षेप गर्ने द्रुत तरीका हो - पर्याप्त समर्थकहरू भेटिए भने। र मलाई लाग्छ कि यो निवेदनको बताइएको उद्देश्य भन्दा बढी लिन्छ।
तथ्य यो हो कि यो पनि सह-निर्णयको उपस्थितिमा आधारित छ। जे भए पनि लोकतन्त्रले सँधै अल्पसंख्यकलाई थिचोमिचो गर्छ जसले उनीहरूको "बाटो" प्राप्त गर्दैन। थप रूपमा, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र पनि खतरनाक छ यदि मिडिया तटस्थ छैन। र पछिल्लो नेदरल्याण्ड्स मा वास्तव मा मामला छैन।
कसरी चीजहरू गलत हुन सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण "द ओर्भिल" सिजन १ एपिसोड be मा देख्न सकिन्छ। यो किनभने "मुख्य धारा" श्रृंखला हो भन्दैमा यसले उपयोगी सन्देश समावेश गर्न सक्दैन ...
म पनि, श .्का गर्दछु कि पावर मेसिनले जे भए पनि सहयोग गर्दछ यदि पर्याप्त मतहरू लिइन्छ, तर राम्रो छ। शट छैन निश्चित रूप मा गलत छ। अझै, यो एक याचिका हस्ताक्षर गर्न अनौंठो लाग्छ। यो अझै पनि भावना हो कि तपाईं चिन्नुहुन्छ कि व्यक्तिहरू तपाईं माथि अधिकार गर्छन् र तपाईं तिनीहरू बिना केहि गर्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईंले स्वीकार गर्नुभयो भने, मानिसहरूले तपाईंको निवेदनलाई किन जवाफ दिनेछन् ... ..
20 मई 2020 मा 22: 26
याचिका कति मानिसहरू सुरू गर्न र आफ्नै प्रतिबद्धता देखाउन इच्छुक छन् भन्ने सर्वेक्षण बाहेक अरू केही होइन। यो अवश्य पनि वर्तमान राजनीतिबाट नियाम्नलाई प्रस्तुत गरिएको छ, तर पर्याप्त हस्ताक्षरको साथ यो संकेत हो: "र अब हामी गइरहेका छौं" वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थातर्फ।
गर्न पहिलो चीज, अवश्य पनि, ट्यूबमा के कडा-हिटि hit् संशोधन हो। यो मुश्किल हो किनभने तपाईले एकै समयमा मान्छेको लत लिनुभयो, तर यो अहिले हो वा कहिले पनि होईन र हामी हेर्ने छौं कति व्यक्ति वास्तवमै तल परिवर्तन गर्नको लागि तल जान इच्छुक छन्।
तपाईं यसलाई गलत हुनबाट रोक्न सक्नुहुन्छ। उदाहरण: अनिवार्य खोप। मानिलिनुहोस् बहुमतले अनिवार्य खोप चाहान्छन् किनकि उनीहरू मिडियाबाट प्रभावित भएका छन् र यो राम्रो छ भनेर विश्वास गर्न आएका छन्। त्यो कानून संविधान विपरीत हो। त्यो संविधानको स्वतन्त्रता र आत्मनिर्णयको अधिकारमा आधारित केहि आधारभूत नियमहरू छन्। त्यसकारण तपाइँले (जुन अहिलेको कानूनसँग हुन्छ) कानूनलाई पास गर्ने वा संविधानलाई बिगार्ने प्रयास गर्ने छैन (मानव आधारभूत अधिकारको आधारमा)।
20 मई 2020 मा 22: 44
जोसँगै पढ्छन् र वास्तवमै हाम्रा बच्चाहरू र तिनीहरूका बच्चाहरूको लागि परिवर्तन चाहन्छन्। तपाईंले सायद याचिकामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, तर यसको मतलब यो परिवर्तन होइन। के तपाइँ केहि गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ र केवल लेख र भिडियोहरू मात्र साझा नगर्नुहोस् जुन केवल कम वा पहिले नै थाहा भइसकेको कुराको पुष्टिकरण हो। के यो "आन्दोलन" लाई केहि थप पदार्थ दिन सम्भव छ, उदाहरणका लागि, भिडियो च्याट सेट अप गर्दा जहाँ चीजहरू तुरून्त छलफल गर्न सकिन्छ र जहाँ उदाहरणका लागि, हामी कार्यहरूलाई वास्तवमै परिवर्तन गर्नका लागि कार्यहरू विभाजन गर्दछौं। वा त्यहाँ ठूलो लक्ष्य समूहमा पुग्नका लागि अन्य सुझावहरू छन्। भिडियोमा देखाईएका धेरै साहसी व्यक्तिहरू (मार्टिनलगायत) छन् जसलाई चीजहरू राख्नको लागि हिम्मत छ। यो समय हो कि हामी आफूलाई ती व्यक्तिहरूसँग आफूलाई दर्पण गर्दछौं र गौंलेटलाई लिन्छौं। तिनीहरू समर्थन पाउन योग्य छन् र जसलाई निष्क्रिय दृष्टिकोण छोड्नु पर्छ। त्यसैले म भिडियो च्याट गर्न सुझाव दिन्छु, तर z2 प्रश्न:
* जो भाग लिन इच्छुक छन्
* त्यहाँ अन्य सुझावहरू छन्
हामी प्रतिक्रियाहरु के हो पढ्नेछौं
20 मई 2020 मा 23: 03
म साँच्चिकै आशा गर्दछु कि मानिसहरूले पहल गर्नेछन्। एक भिडियो च्याट अलि अव्यावहारिक हुन सक्छ, किनकि तपाईं एकै समयमा अनलाइन हुनुपर्दछ, तर तपाईं आफैं खडा भएर स्पष्ट बयान गरेर एक आन्दोलन सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं वास्तवमा भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ र यहाँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसो भए पक्कै पनि हामी राज्यको सोशल मिडिया सेनामा जाने छैनौं (जसलाई 'ट्रोल सेना' पनि भनिन्छ)। विचारहरू र विशेष गरी ठोस कार्यमाथि ल्याउनुहोस्।
एक महत्त्वपूर्ण सुरूवात यदि मानिसहरूले वेबसाइट साझा गर्न सुरु गरे र वास्तवमै अरुलाई विश्वास दिलाउन कोसिस गरे।
21 मई 2020 मा 09: 01
ठूलो सुनिन्छ, हामी मान्छेका शत्रु होइनौं किनकि उनीहरू स्टालिनको शासन अन्तर्गत वर्णन गरिएको छ।
हामी मानिसहरू "हौं"। त्यसैले हामी गुलागमा जानु हुँदैन र डराउनु हुँदैन, हामी जनताका लागि मानिसहरूसँगै छौं
फेरि एकदम परिष्कृत कुरा यो हो कि यदि तपाईं एक मास्क लगाउन चाहनुहुन्न भने, तपाईं मानिस विरोधी हुनुहुन्छ, फेरि जनताको शत्रुको आडमा, उनीहरूले स्टालिनको अधीनमा रहेछन् र अब विश्व स्तरमा। आशा छ कि मानिसहरु पहलको साथ आएका छन्। तपाईं उनीहरूको बिरूद्ध जानुहुन्छ त्यसैले पहिले चेतना जगाउनुहोस्, मिडियाको प्रदर्शनी आदि बनाउनुहोस्, तपाईंसँग मेरो भोट छ
मानिसहरूलाई सचेत गराउने मानिस मानिसहरुको शत्रु होइन, तर "मानिसहरुको मित्र" हुन्छ, गुलाबको अनुसार छैन
21 मई 2020 मा 15: 05
केही पाठकहरूले ठूलो श्रोताको पहुँचका लागि सुझावहरू वा गतिविधिहरूको उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्छन् जुन दर्शकहरूलाई विस्तार गर्न दोहोर्याउन सकिन्छ। फेरि, इन्टरनेटमा खोज साझा साझा प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र को लक्ष्य प्राप्त गर्न योगदान गर्दैन। उदाहरणको रूपमा, म नियमित रूपमा भ्रमण गर्ने साइटहरू सन्दर्भ गर्दछु http://www.fvvd.nl के त्यहाँ अरु धेरै छन् जसले गर्छन? त्यहाँ पाठकहरू छन् जसले प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र र सम्बन्धित साइटको अवधारणाको सचेतना प्रबर्धन गर्न इन्टरनेट बाहिरका गतिविधिहरूमा संलग्न हुन्छन्। यदि हो भने, यसलाई साझा गर्नुहोस् र अरूले लिन सक्दछ। मैले देखें कि हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिहरूको संख्या ११1181१ हो (यस कार्यको लागि अग्रिम धन्यवाद) र त्यो निश्चित रूपमा धेरै गुणा बढी हुनुपर्दछ। मैले पहिले लेखेझैं अब समय आएको छ किनकि साथीहरूको प्रेस ड्रप हुँदैछ। मानिसहरु पेटको भावनाहरु छन् र एक विकल्प खोज्दैछन्। लान्स आर्मस्ट्रstrongको रिस्टब्यान्ड्स कसैलाई याद छ? Zoiest पनि पहिले अनुमान भन्दा धेरै पटक मा समात्नुभयो। मीठो पनि एक सुझाव हुन सक्छ, तर म निश्चित छु कि 1100 व्यक्तिहरु मध्ये जो त्यहाँ हस्ताक्षर गरे पक्कै राम्रो विचारहरु छन्। अरूले पनि सुन्नुहोस्।
21 मई 2020 मा 15: 06
तपाईलाई थाहा छ अल-कद्दाफीलाई के भयो? तपाईको आफ्नै मुद्रा सेट अप गर्नुहोस् र केवल पुग्ने समान विचारधाराका व्यक्ति छन्, मानिसहरूलाई आफू बसोबास गरेको घर आफ्नो सम्पत्ति हो भनेर घोषणा गरेर ठोस आधार दिन उनीहरूलाई मनाउन। बन्ने वा हो र तिनीहरूलाई debtण मुक्त घोषणा। म एफबी बन्द छु र त्यहाँ अधिक हुनुपर्दछ, कम्पनीको साथ सफलता।
« सरकारी मामिलाहरूको बिरुद्ध जोर्डि Zwarts टन मा एling्गल छ, तर केहि प्राप्त छैन
के ट्रम्पको कडा रेखा चीनतिर डलरको गिरावट र अर्थव्यवस्थाको पतनको शुरुआत हो? »
कुल भ्रमण: 2.454.661
परिवर्तनको शक्ति डर, प्रोग्रामिंग र गलत भ्रम को बहावबाट शुरू हुन्छ र एक साँचो क्रान्तिमा बदलिन्छ
आईफोनले भर्खरको आई-ओएस १.19..13.5 अपडेटमा कोविड १-अनुप्रयोग लुकाउँछ
मौरिस डि होण्डले एक र आधा मिटर नियम बकवास (भिडियो) फेला पार्छ
कति डच मानिस अझै पनी आफ्नो बिल भुक्तान गर्न सक्छन् कोरोना संकटको समयमा?
तपाईं अब भण्डारमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्न यदि तपाईं काउन्टरमा तपाईंको नाम र दास नम्बर दिनुहुन्न र यो केवल सुरूवात हो
SandinG op कोरोना स during्कटकालको समयमा पैसाको ठूलो मूल्यह्रासले हाइपरइन्फ्लेसन निम्त्याउँछ: बिटकइनको समाधान हो?
मार्टिन भिजल्याण्ड op परिवर्तनको शक्ति डर, प्रोग्रामिंग र गलत भ्रम को बहावबाट शुरू हुन्छ र एक साँचो क्रान्तिमा बदलिन्छ
मार्टिन भिजल्याण्ड op सरकारी मामिलाहरूको बिरुद्ध जोर्डि Zwarts टन मा एling्गल छ, तर केहि प्राप्त छैन
मार्कोस op के ट्रम्पको कडा रेखा चीनतिर डलरको गिरावट र अर्थव्यवस्थाको पतनको शुरुआत हो?
विश्लेषण गर्नुहोस् op आईफोनले भर्खरको आई-ओएस १.19..13.5 अपडेटमा कोविड १-अनुप्रयोग लुकाउँछ